China Butyl Tube 1200-20 orinasa sy mpanamboatra | Florescence
Mainty misy tsipika manga
Kitapo baoritra na kitapo tenona
VONDROM-PARITRA SA VOAROA
◎ Fampidirana ny vokatra
1.Fanamboarana ny 28 taona, manan-karena injeniera za-draharaha sy mpiasa hanao vokatra kalitao.
2.Ny teknolojia alemanina natsangana niaraka tamin'ny butyl nampidirina avy any Rosia, ny fantsom-bokotra butyl dia manana kalitao tsara kokoa, ary azo ampitahaina amin'ireo fantsona any Italia sy Korea.
3. Ny vokatray rehetra dia dinihina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana 24 ora mba hitsapana raha misy fivoahan'ny rivotra.
4.Manana habe feno izahay, manomboka amin'ny fantson'ny kodiarana fiara, fantsom-pamonoana kodiarana hatramin'ny fantsona OTR sy AGR lehibe na goavambe.
5. Ny fantsonay dia nahazo laza tsara dia tsara any Sina sy manerantany.
6.High fahombiazan'ny famokarana sy ny fitantanana mitarika amin'ny vidiny ambany mifototra amin'ny kalitao somary avo lenta.
7.CCTV Cooperative Brand, mpiara-miasa azo antoka.
1.Q: orinasa ve ianao na orinasa mpivarotra?
A: Izahay dia orinasa any Jimo, Qingdao, ary ny orinasanay dia natsangana tamin'ny taona 1992, orinasa mpitrandraka fantsom-pary.
2.Q: Inona ny fe-potoana fandoavam-bola?
A: Matetika ny fandoavam-bola dia T / T, fametrahana 30% ary fifandanjana 70% alohan'ny hametrahana na L / C.
3.Q: Ahoana no hahazoako santionany?
A: Manome santionany maimaim-poana izahay ary mila mividy ny vidin'ny rivotra ny mpanjifa.
4.Q: Azonao atao ve ny manonta ny marika sy ny famantarana?
A: Eny, afaka manonta bran sy logo anao izahay amin'ny carte na fonosana na kitapo.
5.Q: Ahoana ny kalitaony? Manana antoka ara-kalitao ve ianao?
A: Ny kalitaon'ny Tube dia antoka, ary tompon'andraikitra amin'ny fantsom-pamokarana tsirairay novokarinay izahay, ary azo zahana ny fantsona rehetra.
6.Q: Azoko atao ve ny manao kaomandy hitsapana ny tsena?
A: Eny, ekena ny làlan-dàlana, azafady mifandraisa aminay momba ny antsipiriany misimisy kokoa momba ny filaharana lalana tianao.
Previous: 700x25C Butyl Rubber Bisikileta kodiarana anaty aterin'ny bisikileta
Manaraka: 1000R20 1000-20 Tube Tyre Inner Tube
Tube bisikileta butyl banety
Tube moto butyl moto